. Kune nhamba huru yevatori vematare, asi Apify ndiyo inonyanya kushanda uye ine simba.
Apify is advanced web scraper uye automation software - anti ddos para linux hosting. Inoparadza mashoko kubva kune zvakasiyana-siyana uye inoronga pane imwe nyaya yemaminitsi. Iwe unogona kuunganidza nekugadzira data uchishandisa chiyi. Kana iwe uchida kutsvaga ruzivo kubva pawebsite yefashoni, Apify ichagadzirisa ruzivo rwakabva pamirasi, matengo uye hukuru hwezvigadzirwa. Zvimwe zvekubatsira kwayo kukuru zvinorondedzerwa pasi apa:
1. Nzira yakanakisisa yokubvisa webhusaiti:
NaApify, haufaniri kuumba mahwhefa nemaoko. Ichi chishanduri chinongotumira mahwendefa muRRM yako. Inoshandisa APIs kubvisa zvinyorwa kubva panzvimbo yose. Apify inogadzira data yakakwirira pamusoro pemamiriro ekunze, maitiro emitengo, uye nzira dzokutengesa. Inobvarurawo mapeji ako ewebhu uye inovandudza nzvimbo yako yewebsite.
2. Zvinokodzera munhu wese:
Apify yakakodzerwa nevarimi, vasiri-coders, mabhizimisi, freelancers, vatapi venhau, webmasters, makambani maduku uye mapiyona, uye vatsvakurudzi ve data. Sezvo uri mudzidzi, unogona kushandisa Apify kuti uwane mashoko ekutsvakurudza kwako. Iyi webusaiti scrape r inobatsira zvose zvinyorwa uye mazita makuru. Inotibatsira kutarisa makwikwi edu uye nekuvandudza mashizha matsva nekutengesa.
3. Chimwe chinhu chikuru chekuita mabasa akawanda:
Apify inobatsira kusika mitsva yemashandisirwo ematokari, inovaka mapurogiramu ekubhura ndege, inoongorora misika yemigwagwa, inotsvaga maitiro emiti, uye inoita mamwe mabasa akawanda. Zvechokwadi, iwe unogona kuita zvose zvinyorwa zvekutsvaga kwezvinhu uye webhu yekutamba mabasa nemusangano uyu uye kuwana ruzivo rusina ruzivo mune imwe nyaya yemaminitsi.
Apify's API inowana uye inotora data yakakosha kwauri. JSON inowanzoshandiswa senzira yekuchengetedza kutakura pakati peklayiti uye web server. Inokuchengetedza iwe nekugadzirisa nezvemaitiro ekutengeserana zvino uye unopa mhinduro pamusoro pehuwandu hwe data. Iwe unogona kushandisa sarudzo yaro yekutsvaga API kuti uwane bots akanaka paIndaneti. Pfekai mafiriji data uye inogadzira zvinyorwa zvakasiyana zvemiti yako.
Chimwe chezvinhu zvikuru zveApify ndechokuti inopa hupenyu hwePI dzakasiyana siyana. Iwe unogona kubhadharira kune chirongwa chayo chemhizha uye asingazivikanwi kuita chimwe mumambure. Iwe unokwanisa kuwana mazana emazana eIndaneti makero uye unoita zvakawanda kutamba uye dhiyabhorosi yekuita mabasa pane imwe nguva.
6. Chengetedza Apify newaunofarira mapurogiramu:
Kusiyana nemamwe mavarawo web scraping tools , Apify inogona kusanganiswa neunofarira web web. Iyo inoshandawo kune vadzidzisi uye inovabatsira kugadzirisa uye kuongorora tsvina yekukwira. NaApify, unogona kuwana mawindo emawebsite uye kugamuchira zviziviso. Iwe unogona kutora app pane smartphone yako uye kuita mabasa ako chero nguva uye chero kupi zvako.
7. Zvose zvakazara zviitiko:
Unongotaurira zvauri kuda kukwazva kana kuputika, Apify achaita mabasa ake. Nebasa iri, unogona kubvisa mawebhusayithi uye mablogi nema cookies, redirects, uye AJAX. Iwe haufaniri kuisa chero shanduro-based plugin. Apify is an alternative alternative to Import. Io, Octoparse, Uipath, Screen Scraper uye Kimono Labs.